Ithegi: inqaku eliphambili | Martech Zone
Maka: intetho ephambili
Wonke umntu uyazi ukuba iPowerPoint lulwimi lweshishini. Ingxaki kukuba, uninzi lweepowerPoint alunanto ngaphandle kothotho lwezilayidi ezixineneyo kwaye zihlala zibhidanisa ezihamba nesoliloquies ezinciphisa ukuphefumla ngabasasazi. Siphuhlisile amawaka-ntetho, sichonge ezona ndlela zilula nezilula, kodwa kunqabile ukuba ziqeshwe. Ukuza kuthi ga ngoku, sidale iZiko loMxhuzulane, isakhelo esitsha sokwenza intetho. Umbono kukuba idesika nganye, isilayidi ngasinye, kunye nesiqwenga somxholo
NgoLwesithathu, Oktobha 10, 2018 NgoLwesithathu, Oktobha 10, 2018 Douglas Karr
Esi sithuba ebekufanele ukuba ndisibhale ngaphezulu konyaka odlulileyo, kodwa bendikhuthazekile ukuba ndisibhale ngokuhlwanje emva komsitho ebendithetha kuwo. Kunyaka ophelileyo, ndaya eRapid City, eMzantsi Dakota ndaza ndathetha kwiConcept ONE, umsitho wokuthengisa ishishini wokuqala osekwe nguKorena Keys, usomashishini wengingqi, umnini-arhente kunye ne-South Dakotan. Injongo kaKorena yayikukuzisa izithethi ezinobungcali ezivela kurhulumente ezinakho
Ividiyo: UKevin Spacey Uxoxa ngezinto ezi-3 zokuBalisa amaBali
NgoLwesibini, Oktobha 28, 2014 NgoLwesibini, Oktobha 28, 2014 Douglas Karr
Ukubalisa amabali yiyo yonke ingqumbo ngoku kwihlabathi lokuthengisa. Yayingumxholo wengxoxo kwiNtengiso yeHlabathi yeNtengiso ka-2014 apho uKevin Spacey wenza intetho ephambili… ebalisa ngamabali. Umnumzana uSpacey uhambe ngezinto ezintathu zokubalisa amabali. Ndongeze awam amazwi apha-ungayibukela ividiyo yengcaciso yakhe ephambili (eyayilungiswe ngononophelo ukusika ingqokelela yezihlazo). Ungquzulwano -Ishishini lakho alinakho
NgoLwesihlanu, ndithethile kwi-eduDEV, inkomfa yootitshala beYunivesithi kunye namasebe ezentengiso, malunga nokusetyenziswa kwe-Analytics. Uninzi lwabaphulaphuli lusebenzisa uhlalutyo lukaGoogle, ke umboniso walungiswa ngenxa yalo. Endaweni yokwenza enye inkcazo ekruqulayo kuGoogle Analytics, bendifuna ukubonelela abaphulaphuli ngempembelelo yento izicelo zabo zohlalutyo ezazilahlekile kwaye zeziphi ezinye izixhobo ezazikho ukuzalisa izikhewu. Izixhobo endizenzileyo
Ndibe nencoko nomhlobo wam namhlanje kwaye ndafumana i-imeyile komnye ebuza ingcebiso yam ngendlela yokwakha uphawu lwabo lobuqu ... kwaye ekugqibeleni ndizuze ngalo. Esi inokuba sisihloko esiphendulwa ngcono ngumhlobo uDan Schawbel, ingcali yokufaka uphawu lobuqu… ke jonga ibhlog yakhe. Ndiza kwabelana ngeengcinga zam ngento endiyenzileyo kule minyaka ilishumi idlulileyo, nangona kunjalo. Ziveze ngendlela onqwenela ukuba ibonwe ngayo-mna